Amazon ikwughachi Gosi, nyochaa: Nnukwu ọkà okwu na nnukwu ihuenyo na Alexa | Akụkọ akụrụngwa
Amazon ikwughachi Gosiputa, nyocha: Nnukwu okwu na nnukwu ihuenyo na Alexa
Miguel Hernandez | | Ngwa, Nyocha
Anyị na-aga n'ihu na-enyocha ngwaahịa ndị ahaziri iji nweta ọtụtụ enyemaka na-enyere aka na ịntanetị nke ihe. Homeslọ anyị na-enweta amamịghe maka ngwaahịa ndị a nwere ejiji karịa oge ọ bụla, nọrọ na anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ihe niile Amazon Echo Show nwere ike ịnye ndị ọrụ. Enwere ọtụtụ ngalaba nke juru anyị anya na ndị ọzọ mechuru anyị ihu, ị chọrọ ịma ha?
Dị ka oge niile, anyị hapụrụ gị n'isi isiokwu a vidiyo nke ị ga-ahụ nke ọma ihe niile anyị na-agwa gị ebe a, yana nke anyị kwadoro ka ị gaa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ etu ihuenyo 10,1-inch a si arụ ọrụ na akaụntụ ihe nkuzi nkuzi nke Amazon. Ọzọ nke ike ya bụ kpom kwem ịdị mma na ike ụda ya, ihe ị ga - enwe ike ịlele na vidiyo. Enweghị oge ọzọ anyị ga-ekwu maka ọdịnaya nke Amazon Echo Show ka i wee nwee ike ịtụ nzụta gị. Anyị na-ahapụ gị njikọ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya Amazon.
1 Imewe na ihe: Na-akụ na ndị ọzọ nke ikwughachi iche
2 General njirimara: Nnukwu ihuenyo na nnukwu adịghị
3 Ogo ọdịyo, Zigbee protocol na igwefoto agbakwunyere
Imewe na ihe: Na-akụ na ndị ọzọ nke ikwughachi iche
Amazon ejirila otu ihe maka Echo Show dịka ngwaọrụ ndị ọzọ o nwere. Anyị na-ahụ na-arụpụta diaphanous na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha oji, dabere na ụcha ahọrọ. Akụkụ ihu dị kpamkpam maka ihuenyo 10,1-inch, ebe n'elu bezel anyị ga-ahụ perforations maka igwe okwu anọ. na naanị bọtịnụ atọ: Mpịakọta olu + na -, yana bọtịnụ iji mechie igwe okwu, ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-acha uhie uhie iji gosi na agbanyụrụ ya, anyị ahụghị ọkụ ọkụ ndị ọzọ na-abụghị nke gụnyere na ihuenyo ahụ.
N'azụ - Ọkà okwu
Size: X x 246 174 107 mm
Ibu ibu: 1,75 n'arọ
Akụkụ ihu nwere ụfọdụ okpokolo agba dị mkpa, ma ọ dịghị ihe dị ịrịba ama, ebe anyị na-ahụ oghere anọ ọzọ maka igwe okwu anọ ọzọ (ngụkọta nke asatọ) na igwefoto n'ihu nke a ga-eji maka nzukọ vidiyo. Na azụ anyị nwere ndị ọkà okwu zoro n'azụ akwa naịlọn nke na-esonyere agba nke ngwaọrụ anyị nwetara, na-ejedebe na rectangle na ọdụ ụgbọ mmiri njikọ, na nke a naanị microUSB na ọdụ ụgbọ AC / DC nke na-enye ya ike. Na ala anyị nwere okpu mkpuchi roba na-agbanwe ngwa ngwa nke na-eme ka ngwaọrụ ahụ dịrị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
General njirimara: Nnukwu ihuenyo na nnukwu adịghị
Anyị na-amalite na ihuenyo, agaghị ekwe omume ileghara nke ahụ anya 10,1 nke anụ ọhịa ahụ "nnukwu", na-eji teknụzụ IPS LCD iji nye anyị ihe karịrị nchapụta zuru oke maka ime ụlọ, otu o sila dị, anyị hụrụ nzaghachi ọkụ nke na-enwusi ike nke ukwuu na ụda ojii, nke kachasịkarị na njirimara onye ọrụ. Ekpuchie ya na iko, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, n'otu oge ahụ ọ nwere teknụzụ capacitive, dịka o mere na Amazon Echo Spot na-emekọrịta ihe na ihuenyo dị mfe na otu esi eme ya. O sina dị, Enwere m mmechuihu na eziokwu ahụ na ọ pụtaghị na ọ nwere mkpuchi mgbochi mkpisi aka, O doro anya na ebe ọ bụ na etinyere ya na ngwongwo ọ na-adịkarị ọcha ma ọ bụrụ na onye nwe ya doro anya ma ọ bụrụ na ihuenyo ahụ jupụtara na mkpịsị aka, ihe ga-aba ụba ma ọ bụrụ na obere ụlọ ahụ na-emekọrịta ihe na ya.
Ihuenyo: 10,1-anụ ọhịa aka LCD na mkpebi HD (1.280 x 800 pikselụ)
Ihe nhazi: Atom Intel x5-Z8350 (1,44 GHz kwụsiri ike)
Njikọ: Bluetooth na Dual-gbalaga 802.11ac WiFi
Nlekọta: Technology Zigbee
Ike ndu dị n'aka Intel, ihe dị iche n'ụdị ngwaọrụ a. Anyị achọtaghị igbu oge, n'ezie ọ dịghị ihe na-eme ka anyị chee na ike adịghị, ọ bụ ezie na o doro anya na ngwaọrụ ejedebeghị na ụfọdụ ọrụ na ọ bụghị mgbe niile bu n’obi iji mepụta ụdị ọdịnaya ọ bụla. Ahụghị m akụkụ ọ bụla nke m furu efu karịa ike, n'agbanyeghị eziokwu ahụ Ihuenyo nwere ike ibuputa na opekata mpe mkpebi HD na-eburu n’uche na ọ bụ ngwaọrụ nke “ga-enwupụta” site n’ìhè nke ya n’ịchọ mma anyị.
Na ọkwa njikọ anyị jikọtara WiFi abụọ (2,4 GHz na 5 GHz) ihe inwe ekele maka n'oge ndị a ebe anyị nwere netwọkụ ikuku maka ikuku "jupụta". Njikọ ahụ Bluetooth ọ bụ kama testimonial na iji na njikọ na ụdị ọ bụla nke ọkà okwu. Anyị nwere FireOS dị ka sistemụ arụmọrụAnyị amaworị na ọ bụ mbipute gbanwere nke gam akporo emere iji mee ka ngwaahịa Amazon dị iche iche dị ka o kwere mee. Anyị hụrụ igwe okwu asatọ na kagbuo mkpọtụ mkpọtụ na ha ga-ege anyị ntị nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla nakwa na ha enyela ezigbo nzaghachi na ntuziaka anyị. Banyere ndị ọkà okwu na igwefoto, anyị ga-enye nkọwa ndị ọzọ n'okpuru, ma ha kwesịrị ngalaba nke ha.
Ogo ọdịyo, Zigbee protocol na igwefoto agbakwunyere
Ọ nwere Igwefoto 5 MP, karịa ihe zuru ezu maka nzukọ, ma na anyị ga-echefu iji na ihe omume na anyị chọrọ ise foto, na-arụpụta bụ ihe dị ka na-aga azụ 2009. Otú ọ dị, ọzọ isi ebe a Amazon ikwughachi Gosi na-enwu bụ kpomkwem bụ eziokwu na O nwere teknụzụ Zigbee, nke a pụtara na anyị ga-enwe ike itinye ngwaọrụ a dị ka etiti ngwa Chefukwa banyere àkwà mmiri ndị abụọ Philips na ngwaahịa IKEA nwere.
Igwefoto: 5 MP
Ọkà okwu: 2.0 ″ 2 stereo na neodymium magnet na passive bass radiator
Ugbu a, anyị na-ekwu maka ndị na-ekwu okwu, nke nwere okwu igwe abụọ nke anụ ọhịa abụọ nwere magnet neodymium
na n'ezinụlọ baasi radiator. Isi ihe nke hapụrụ m uto kachasị mma n'ọnụ m, yabụ ana m ekwusi ike na ọ nwere ike bụrụ naanị usoro ọdịyo dị n'ime ụlọ ọ bụla., o nwere teknụzụ Dolby ma na-enye ụda dị oke mma nke na-anaghị ekpughe ụdị ụkọ ọ bụla ọbụlagodi na oke ike ya. N'ezie, ọ na-enye ezigbo bass dị egwu, kpachara anya na ebe ị debere nnukwu ọkà okwu a. Eziokwu ahụ bụ na ọ dị arọ nke ukwuu na-enye anyị ihe ngosi doro anya nke ihe anyị ga-ahụ na ngalaba a.
A minimalist imewe na obi ụtọ na mma
Olu dị elu, karịa ka a tụrụ anya
A ala price niile mpi
Ihuenyo buru ibu na ezigbo njirimara onye ọrụ
Ọtụtụ akara akara fọdụrụ
Ntọala dị mgbagwoju anya
Mkpebi siri ike na-efu
Mee elu mee ala anyị na-achọta ngwaahịa ị nwere ike ịzụta site na 229,99 euro na njikọ a na agba abụọ, oji na ọcha. N'iburu n'uche ihe dị iche na ọnụahịa na Amazon Echo Plus na ịmara na ọ na-ada ka mma, tinyere ya na ihuenyo, ọ na-esiri anyị ike ịghara ịkwado ya. Obi abụọ adịghị ya ma eleghị anya ọ bụghị ngwaọrụ kachasị mma ịme ụzọ mbụ na nso Echo, mana ọ bụ nke zuru oke na nke ga-abụ ebe etiti mmekọrịta anyị ozugbo ọ bụ akụkụ nke ụlọ anyị.
Onye edemede: 68%
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Amazon ikwughachi Gosiputa, nyocha: Nnukwu okwu na nnukwu ihuenyo na Alexa
Vodafone TV biara na Smart TV nke Samsung, otu esi etinye ya
Huawei weputara Huawei Y7 2019, smartphone maka akpa ya niile na AI